सम्बन्धका ७ प्रकारहरु : तपाईंको सम्बन्ध कस्तो ? | सुदुरपश्चिम खबर
सम्बन्धका ७ प्रकारहरु : तपाईंको सम्बन्ध कस्तो ?
व्यक्ति जो कोही अरुभन्दा फरक हुन्छ । अरुसँग मिल्ने केवल व्यक्तित्व हो । रोजाईहरु समान हुनसक्छन् । क्षमताहरु फरक फरक हुने गर्छ । जोसँग हाम्रो रोजाई समान हुन पुग्छ । त्यो मान्छे हामीलाई मन पर्छ । उसैसँग जीवन नै बिताउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । तर, त्यो सम्बन्धले पनि जोडीको व्यक्तित्वलाई चित्रित गर्ने गर्दछ । दुई जनाको जोडीमा जब एकै किसिमको सम्बन्ध हुन्छ । अनि मात्रै दीर्घकालीन सम्बन्धको सुरुवात हुन्छ । अक्सर प्रेमी र प्रेमिकाबीचको सम्बन्धहरु कस्तो कस्तो हुन्छ ? त्यो विषयमा हामीले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
माथि उल्लेख गरिएकामध्ये तपाईंहरुको जोडी कुन् किसिमको छ ? भन्ने कुरा खासै फरक पर्दैन । यो पनि आवश्यक छैन कि सम्बन्ध माथि उल्लेख गरिएको नै हुन्छ भन्ने । कुनैपनि जोडी माथि उल्लेखित कुनै पनि श्रेणीमा नपर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)